Isu takaedza audiomax HB-8A Bluetooth mahedhifoni | IPhone nhau
Kana isu tichitsvaga ye-nzeve-nzeve musoro neBluetooth yekubatanidza, mitengo inowanzo kukwira kumusoro. Mhando dzakakurumbira dzinokwidza mutengo wezvigadzirwa nehunhu uhwu, kunyangwe rombo rakanaka, dzimwe nzira dzinoonekwa pamusika senge audiomax HB-8A mahedhifoni.
Iwe pamwe hauna kumbonzwa nezve ichi chiratidzo asi chokwadi ndechekuti zvigadzirwa zvaro vari kuwana wongororo dzakanaka saka hapana zvirinani kupfuura kuvaedza kuti titore mhedziso dzedu.
3 Hunhu hwekurira
5 Zvimwe zvinongedzo
Iko kurongedza kwe audiomax HB-8A mahedhifoni ari nyore kunyangwe mukati isu tichawana zvese zvaunoda kuti uwane zvakanakisa kubva pane idzi helmete:
Audiomax HB-4.0A Bluetooth 8 Mahedhifoni
MicroUSB yekuchaja tambo
Inobatsira tambo inoenderana ne3,5 mm jack
Icho chirevo chekuti kavha inosanganisirwa sezvo tichitenda, tinogona kuzvichengeta zvakachengeteka uye kuvadzivirira kubva pakuita guruva, kukwenya, nezvimwe.
Aya ari-munzeve mahedhifoni anoisa parutivi iwo azvino mavara uye kubheja pane a sober uye yakashongedzwa dhizaini, kusanganisa aluminium yakabwinyiswa nemapads matema ane rupo, chimwe chinhu chatinozokoshesa kana tikapedza maawa akati wandei navo mumisoro yedu.
Ehe, iyo audiomax HB-8A vakasununguka kwazvo. Iyo bhanhire remusoro haimanikidzi zvakanyanya mumusoro medu kunyangwe inobata zvakakwana. Iwo mapedhi anounganidza zvakakwana nzeve yedu yese uye zvakare inopa chikamu chekuzviparadzanisa neruzha rwekunze (hapana ruzha kudzima tekinoroji).
Kana zvasvika pakuchengeta mahedhifoni, tinogona peta iwo mune ruoko uye kuderedza nzvimbo yavanogara. Iyo yekupeta michina inondinetsa ini uye ndeyekuti inonzwika yakanyanyisa kurira sekunge tambo yepurasitiki inoparadzanisa nzvimbo yakapetwa kubva kune yakajairwa. Vaka mhando yakanaka saka ndinovimba iyo system haizove dambudziko mune ramangwana.
Ndakagara ndisingazeze kushandisa Bluetooth yekuteerera kumimhanzi. Kurasikirwa kwehunhu kunoonekwa pamberi peiyo odhiyo jack kana imwe wired yekubatana, izvo pasina kukanganwa izvo zvinokanganisa patinobuda kunze kwehurefu hunofukidzirwa neiyi kubatana (10 metres maximum).
Iyo audiomax HB-8A yakandishamisa chaizvo kana zvasvika kune ruzha mhando. Ndiri kunyunyuta pamusoro pamahedhifoni uye mashoma ndiwo mamodheru andinofarira, zvisinei, izvi ipa ruzha rwakaringana between frequency zvekuti hapana imwe yadzo inomira pamusoro pevamwe. Iwo mabass ane punchy kunyangwe isina hudzamu uye yepakati uye yakakwirira mafambiro akachena, pasina kukanganisa kunyange kana isu tichizunza nevhu rakakwira kupfuura zvakajairwa.
Mugadziri weheti idzi dzeheti dzeBluetooth anovimbisa a kuzvimiririra kwemaawa gumi nemanomwe uye inoita saizvozvo, yakamira pamutengo pamusoro pevhareji yakajairwa. Kuve werudzi rwe-nzeve kwakatibvumidza kuunza bhatiri remipimo ine rupo uye kana tikawedzera kune izvi kushandiswa kwakaderera kweBluetooth 4.0 protocol, tinowana hupenyu hunoshamisa hwebhatiri.
Kubhadharisa audiomax HB-8A isu tichafanirwa kuenda kune iyo microUSB tambo inouya yakajairwa. Kana isu tikapera bhatiri, imwe sarudzo yekuenderera kuishandisa ndeyekutendeukira ku 3,5 mm odhiyo jack uye nekudaro ivo vanozove echinyakare tambo mahedhifoni.
Kupedza pamwe nekuongororwa kweiyo audiomax HB-8A, ingo ziva kuti nekuda kwekubatanidza kweBluetooth, tinogona vashandise sevasina maoko.
Pafoni yekurudyi pane bhatani kupindura mafoni uye mamwe maviri atinogona kudzora kuwanda kwemimhanzi kutamba.
Pamutengo we69,99 euros, audiomax hb-8a mahedhifoni iyo sarudzo yakakurudzirwa kwazvo Kana iwe uri kutsvaga kuteerera kumimhanzi isina tambo, iine mwero ruzha mhando uye nekugona kukuru kunogoneka, zvese pasina kusiya chikwama chako chisina chinhu. Vakandikurudzira uyezve, idanho riri pamusoro pemamwe anodhura mahedhifoni asi kubva kune vane mukurumbira mabrandi.
Kudzokorora kwe: Nacho
Inopokana yemhando yekupeta mashandiro
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » IPhone zvishongedzo » Isu takaedza audiomax HB-8A Bluetooth mahedhifoni
Ko mutengo weiyo iPhone 6 unodonha panobuda iyo iPhone 6s?